Caqli Dhalmo Daayay | Doodwadaag waa Danwadaag.
Awoodda aadanaha hagta waa caqligiisa. Si baahidiisa u daboolo, waxaa jirtay mar uu ku noolaa ugaarsi. Haddana caqligiisu wuxuu gaaray inuu xoolo dhaqdo. Hadana wuxuu gaaray inuu dhulka beerto. Haddana wuxuu bilaabay inuu adeeg kala gato, oo wax is waydaarsado. Haddana wuxuu gaaray waxsoosaar badan oo warshado iyo sanco sara ku salaysan.
Markasta shaqada caqligu waxay ahayd, inuu xalliyo marba baahida jirta. Mar walba caqligu wuxuu aadanaha ugu adeegayay, tayada iyo kartida uu markaas leeyahay. Sidaas ayaa lagu noolaa ilaa ay timaado marxaladda hadda la marayo oo ah, in qaybo aadanaha ka mid ah, caqligii laga curyaamiyay.
Sidee bay ku timid in shaqadii caqligu qaban jiray meesha laga saaro? Laga bilaabo xilligii hor-umarka reer galbeedka ee cilmiga iyo warshadaha uu meel fiican ka gaaray, waxay aad ugu baahnaayeen inay gadaan wax soo saarka caqligooda iyo cilmigooda. Si taasi suura gal u noqoto, waxaa lagu qanciyay dad badan oo aadanaha ka mid ah in shaqadii loo qabtay. Sidaas darteed aysan u baahnayn inay dhibtoodaan ama wax baaraan.
Waxaa jiray, dawlado yar oo ka fakaday in caqligooda shaqada laga joojiyo oo ay isticmaalaan caqliga sancada iyo warshadaha ku xeel dheeraaday ee ummadaha hor u kacay.
Dadkaas waxaa kamid ah, Japan, chine, India waxay kamid ahaayeen dadkii yaraa ee ka fakaday in shaqada loo qabto. Dadka intoodii kale, gaar ahaan Muslimiinta, waxay ku qanceen in shaqadii loo qabtay oo ay heli karaan wax kasta oo ay u baahan yihiin. Sidaas daraadeed ay dhib la’aan ku soo gataan wax kasta oo ay rabaan.
Halkaas waxaa ka dhashay, caqli shaqaynaya oo wax soo saaraya iyo Caqli nastay oo waa hore shaqadii caqliga ka fariistay. Caqliga shaqeeya wuxuu u baahan yahay meel uu wax ka gado. Haddii kale suuq ma helayo. Marka waa in la helo dad aan caqligoodu u shaqayn ee mar walba ku xiran oo u baahan wax soo saarka caliga shaqeeya. Taasi waa sida hadda xaaladda caalamku tahay.
Annaga Soomaali ah, waxaa nalaga joojiyay, dhammaan koritaankii sancada sida: Koortii, birihii, dhiishii, haruubkii, haantii, yeeshii, gaameelkii, warankii, seeftii, udubkii, danbiishii, yagloolkii, raarkii, salligii, cawshii, iyo dhammaan agabkii nolosha ee aan annagu lahayn. Mar haddii aan joojinnay wax soo saarkii, wax kale oo noo bannaan ma jirto oo aan ka ahayn inaan soo gadanno waxa aan u baahannahay oo dadka kale sameeyeen. Waa ceeb iyo cayr joogto ah, iyo caqligii oo dhalma daayay.